एक केश्रा लसुन मुखमा ३० मिनेटसम्म राख्नाले शरिरलाई हुन्छ यस्ताे अपत्यारिलो फाईदाहरु ! – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / एक केश्रा लसुन मुखमा ३० मिनेटसम्म राख्नाले शरिरलाई हुन्छ यस्ताे अपत्यारिलो फाईदाहरु !
एक केश्रा लसुन मुखमा ३० मिनेटसम्म राख्नाले शरिरलाई हुन्छ यस्ताे अपत्यारिलो फाईदाहरु !
admin June 10, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 60 Views
एक केश्रा लसुन मुखमा ३० मिनेटसम्म राख्नाले शरिरलाई हुन्छ यस्ताे अपत्यारिलो फाईदाहरु ! लसुन हामीले भान्सामा दैनिक प्रयोग चिज हो । यसलाई हामी तरकारी र दालमा बडी मात्रामा प्रयोग गर्ने गर्ने गर्दछौं । लसुन हाम्रो खानाको स्वाद बढाउन मात्र नभई हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि निकै लाभदायक हुनेगर्छ ।
लसुनलाई प्राचिनकाल देखि नै विभिन्न औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्ने गरेको पाईछ। लसुन हाम्रो शरिरको लागि अति उपयोगी मानिछ । तपाइलाई लसुनको बैज्ञानिक आधारमा के कस्ता फाईदा छन् यसका बारे जानकारी दिंदैछौ । हरेक दिन भुटेको लसुन खानाले हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ । एक पोटि लसुन ३० मिनेटसम्म मुखमा राख्दा हुने फाइदा यस्ता छन्:-
१) लसुनको नियमित प्रयोगले हामीलाई अकल्पनीय धेरै फाइदा हुने गर्दछ । यसको नियमित सेवनले शरीरको रगत रक्तचाप नियन्त्रण गर्नुको साथै रक्तचाप बढी अर्थात् ब्लड प्रेसर हाई हुनबाट रोक्छ । शरीरमा बोसो कम पनि गर्दछ । लसुनलाई साँच्चै, एक स्वस्थ चकलेटको रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।
२) यसमा भिटामिन ए, भिटामिन बी भिटामिन सी, फलाम, इन्जाइम, आवश्यक तेल, आयोडिन, पोटासियम, क्याल्सियम, सेलेनियम, सल्फर र फस्फोरस लगायतका थुप्रै ४०० धेरै मानब शरीरका लागि आवश्यक तत्व पाइन्छ ।
३) लसुनको एउटा पोटी ३० मिनेट वा केहीबेर आफ्नो मुखमा राख्नुहोस्, जसले तपाइँको रक्तनली सफा गर्नुको साथै हजुरको मुखबाट फोहोर हटाउ पनि हटाउदछ । यसरी मुखमा केहीबेर लसुन राख्नाले तपाइको मुखको सामान्य निफेक्सन निको हुनेछ र दुर्गन्ध समेत हराउने छ । त्यस्तै यसले मृगौला,छाला सफा राख्ने कार्य पनि गर्दछ । हामीले नियमित लसुनको प्रयोग गर्न सक्यौ भने यस्ता थुप्रै रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
४) यसले हाम्रो शरीर रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने कार्य गर्नुका साथै अन्य धेरै कुराको लाभदायक रहेको विशेषज्ञको सोधबाट पत्ता लागेको छ । मानिसको स्वास्थ्य राम्रो र बलियो बनाउन विशेषज्ञद्धारा सिफारिस गरिएको एउटा महत्वपूर्ण खाद्यवस्तु हो, लसुन ।
५) लसुनमा ४०० भन्दा बढी भिटामिन तथा खनिज पदार्थ रहेको हुन्छ । लसुन नाम जस्तै मानवको लागी सुन भन्दा पनि अति महत्वपूर्ण रहेको चिकित्स्या बिज्ञानका विशेषज्ञहरुको भनाई छ ।
Previous बिदेश बाट आउनेको लागि यस्तो नियम: आफ्नै खर्चमा दुईपटक पीसी आर गर्नुपर्ने !
Next तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ त ? दर्शन गरि पढ्नुहोस आजको राशिफल !
काठमाडौँ । गोरो वर्ण, सुन्दर अनुहारले मात्र व्यक्तिको व्यक्तित्व झल्काउँदैन । त्यसका लागि व्यक्तिको मुख …